Ady amin’ny mpampihorohoro Manampy amin’ny fifehezana ny sisin-dranomasina ny Amerikanina
Miaramila sandoka teny Analakely Fanamian’ny rainy efa maty no entiny manala azy
Tovolahy iray mpisandoka ho miaramila no nifanehitra tamin’ireo tena miaramila mpanao fisafoana amin’ny alina.
Bar – karaoke – Discothèque Mila alalana any amin’ny prefe raha hanitatra ny ora fisokafana
Ny ankamaroan’ireo Bar misokatra ao amin’ny Boriborintany fahatelo dia saika manaja ny ora fidina amin’ny 9 ora alina avokoa, saingy, mbola misy ny manidy ny varavarana fotsiny, nefa mbola misy olona misotro ao anatiny.
Trafikana zavamahadomelina Rongony 86 kg indray no tratra tany Port-Berger
Eo am-pidinana ifotony hizaha ny mpandray any Mahajanga sy mpivarotra ambongadin'ny rongony avy any Ambanja ary ireo roalahy tafaporitsaka ny mpitandro filaminana.
Halatra 120 tapitrisa ariary tany Antsirabe Ny mpiasany ihany no namadika ilay mpambongady
Nahazo vahana tato ho ato ny fivadiham-pitokisana niafara tamin’ny halatra vola be, indrindra amin’ny fotoana androtsahana izany amin’ny banky.
Ady amin’ny lozam-pifamoivoizana sy kolikoly Nanentana ny mpampiasa lalana ny CIRGN Toliara
Mitohy hatrany ny fanentanan’ny CIRGN Toliara na Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale ho an’ireo mpamily mampiasa ny lalam-pirenena faha-7 ho fiarovana amin’ny lozam-pitaterana.
Digue - Antohatapenaka 10 mahery noratrain’ny taksibe roa nifandona
Nitrangana lozam-pifamoivoizna teo amin’ny «digue» Andohatapenaka omaly hariva. Samy fiara mpitatitra no nifandona mafy.
Raharaha Alana Cutland Tsy nisy fanampim-baovao hafa azo tamin’ny fitiliana ny razana
Araka ny fampitam-baovao ofisialy teo amin'ny hopitaly HJRA, vita avokoa ny fomba arahina araka ny lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny fatin'ilay tovovavy anglisy Alana Cutland.
Anisan’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny trafikan’ny harem-pirenena ary ny fampidirana basy an-tsokosoko ny fifehezana ny sisin-dranomasina.
Mampiahiahy ireo firenena tandrefana ny tambajotran’ny mpanao ratsy tahaka ny mafia sy ny mpampihorohoro izay mandalo amin’ny fari-dranomasina Oseanina Indianina. Araka ny loharanom-baovaon’ny mpampianatra any amin’ny oniversite amerikanina. Manara-maso an’i Madagasikara noho ny fifanarahana maizimaizina ny tandrefana. Ao anatin’ny fanatsarana ny paik’ady atao amin’ny famerenana ny fandriampahalemana an-dranomasina sy ho fiarovana ny fari-dranomasin’i Madagasikara, napetraka ny «Zone Maritime Prioritaire d’Intervention ZMPI». Nijery ifotony ireo toerana hametrahana ireo tobim-piantsonana ny Amiraly Antoine de Padoue Ranaivoseheno, Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena niaraka tamin’ny Masoivoho amerikanina eto Madagasikara sy ny tompon’andraikitry ny fiarovana eo anivon’ny masoivohony. Notsidihin’ireto delegasiona ireto ny faritra atsimo Toliara sy Tolagnaro izay notarihin’ny Jeneraly Théophile Rakotonirina, Lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy ny 12 hatramin’ny 14 mey teo ary nitohy tany amin’ny faritra avaratra, Mahajanga ka hatrany Maroantsetra izay notarihin’ny Amiraly Antoine de Padoue Ranaivoseheno.